15 / 01 / 2018 | RayHaber | raillynews
Maalin: Janaayo 15, 2018
1 Gaadiidka Dadweynaha ee Trabzon
Dowlada hoose ee Trabzon ayaa qaaday 2017 milyan 13 kun 63 rakaab ah sanadkii 551. Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Trabzon Orhan Fevzi Gumrukcuoglu, "Maalin iyo habeenba si loogu adeego dadkeenna iyadoo aan la dhihin," ayuu yidhi. Gaadiid ballaaran oo ballaaran [More ...]
Makhraadiga beerashada farsamada oo laga furay Sivas
Agaasinka Gobolka ee Sivas ee Waxbarashada Qaranka, Gaadiidka TCDD Inc. iyo İŞKUR Gobollada Agaasinka ah ayaa furay Koorso Tababbarka Mashiinka. Furitaanka barnaamijka koorsada oo ay iska kaashadeen Xarunta Waxbarashada Dadweynaha iyo Kuxigeenka Duqa Magaalada ASO [More ...]
Kardemir Leaves sanadka 2017 oo leh wax soo saarka
KARDEMİR A.Ş. wuxuu shaaciyay in la xiray sanadka haray ee 2017 ee soo saarista heerarka rikoorka iyo iibka. Marka loo eego bayaanka Kardemir, wax soo saarka ayaa kordhay sanadkasta maalgashiga la sameeyay ilaa 2002 iyo [More ...]
Mashruuca Channel Istanbul ayaa lagu dhawaaqay!
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, wuxuu cadeeyay in howlaha laxiriira Mashruuca Channel Istanbul laga sii wadi doono wadada Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu. [More ...]
Xiddiga Tareenka Dib u Kabashada
Seda Gök, tiiriyaha Ticaret Gazetesi, ayaa wax ka qortay maalgalinta wadooyinka tareenka ee Turkiga. Waxaan idin la wadaageynaa qoraalada Gök, oo wax ka qoray maalgashiga lagu sameeyay tareenka, mashaariicda socda iyo yoolalka tareenka. INAAD AKHRISO [More ...]
Waa maxay horumarka ka socda mashaariicda waa weyn sida 3 Airport, Kanal Istanbul, 3 dabaqa Istanbul Tunnel? Goorma ayaa lagu dhawaaqi doonaa magaca garoonka diyaaradaha? Sidee loo go'aamin doonaa? Goorma ayaa lagu dhawaaqi doonaa jidka Channel Istanbul? Buugga Yavuz Sultan Selim iyo [More ...]
Yaa Loo Diiday Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sayniska ee Ankara-Sivas?
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, Train Speed ​​Speed ​​High (YHT) 'oo ku saabsan dib u dhaca imaatinka Sivas,' 'shaqsi ahaan waxaan weydiin doonaa xisaabtan,' 'ayuu yidhi. Ka dib markii lagu dhawaaqay, waxay ahayd su’aal ah cidda ama cidda mas'uul ka ahayd. Khubarada, YHT'nin [More ...]
Ka jawaabista ficilka cusub ee IZBAN ma ogaanin dhageysiga
15 ee İZBAN wuxuu bilaabay codsi codsi oo ka jawaabaya dalabka sicirka masaafada ee la qaban doono ilaa Febraayo. Dawlada Hoose ee Magaalada polzmir waxay kordhisay boqolkiiba 10 khidmadaha gaadiidka dadweynaha sanadka cusub. [More ...]
24 Saacadda Mowjadda Metro
Wakiilka CNN Turk Ankara Hakan Celik, oo ka qeyb qaatay barnaamijka tooska loo siiyo, Duqa Magaalada Ankara Assoc. Dr. Mustafa Tuna wuxuu caddeeyey inaysan kor u qaadidoonaan gaadiidkooda 2018 oo aysan iyagu sameyn doonin [More ...]
RayHaber 15.01.2018 Warbixinta Shirka
Adeegga isgaarsiinta ayaa la bixin doonaa
Alaabada la Diiday ee Gaadiidka Dadweynaha ee Kayseri waa deeqay
Gaadiidka Dawlada Hoose ee Kayseri Inc. nidaamka tareenka, basaska iyo joogsiyada alaabada la ilaaway ama lumay iyadoo lacag lagu deeqay iyadoo lagu deeqay Bisha Cas. Gaadiidka Dawlada Hoose Weyn Inc. hilmaamay tareenka, baska iyo joogsiga [More ...]
Gawaarida basaska ee aan helin ciqaab maskaxeed oo naafo ah!
Magaalada Bursa, boosteejadu ma soo aado basaska caadiga ah, ee naafada ah, sidaa darteed darawalka basaska dadweynaha ee kursi cuuryaamiinta ah looga ilaaliyo rakaabka saaran gaariga curyaanka ayaa la ganaaxay. Duqa magaalada Bursa Alinur Aktaş ayaa ku sugan Gemlik [More ...]
Bostanlı Baaskiillada iyo Sunset Terrace waxay abaalmarin u siiyeen
Bostanlı Pedestrian Bridge iyo Sunset Terrace, oo ay hirgalisay İzmir Magaalo Weyne iyada oo ujeedadu tahay güçlendir adkeynta xiriirka muwaadiniinta la leh badda badda, iyo Sunset Terrace, abaalmarinta qeybta dowladeed ee Tartanka Abaalmarinta Loo shaqeeyaha ee Arkitera taasoo ku dhiirigelineysa maalgashadayaasha sidii ay u dhisi lahaayeen dhismayaal aqoon leh. [More ...]
10 ma awoodi doonto inay u hesho IZBAN iyada oo aan TL
Safarkii labaad ayaa imanaya. 'Ma doonayno olole Codsi Qiime Ku saleysan Kilometer' ah oo la bilaabay. Wadahadal cusub ayaa ku yimid tiirarka İZBAN ee gaadiidka dadweynaha ee İzmir. İZBAN, oo iskaashi la leh TCDD / İzmir Dawlada Hoose ee Magaala Weyn, ayaa mas'uul ka ah warbaahinta bulshada. [More ...]